Faah faahino laga helayo dib u dhaca kulanka ra'iisl wasaaraha lagu horgeynayo baarlamaanka. - Jowhar somali news leader
June 22 (Jowhar.com)- Waxaa maanta dib u dhac uu ku yimid kulan balaaran oo lagu waday in golaha shacabka lagu horgeeyo ra’iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Xamse Cabdi Barre, waxaana warar dheeraada laga helayaa sababaha keenay baaqashada.
Maqnaanshaha madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo jira safar dalka Imaaraatka Carabta ah oo qorshaha ahaa inuu qaato laba cisho balse haatan sii galaya maalintiisii saddexaad iyo maqnaanshaha gudoomiyaha golaha shacabka oo safar ugu maqnaa maalmahan dalka Kenya walow saaka uu dalka dib ugu soo laabtau ayaa loo aaneeyay baaqashada fadhigii maanta.
Ra’iisil wasaarae Xamse Cabdi Barre oo la soo magaaabay maalinimadii Arbacada ee todobaadkii hore ayaa maalmahan magaalada Muqdisho ka waday kulamo uu ku doonayay inuu codka kalsoonida uga helo golaha shacabka, wuxuuna kulamada la qaadanayay xildhibaabada oo hab maamul goboleed iyo kutlo ahaan u qeybsan oo uu kala gaar u qaabilayay.
Warar aan la xaqiinin ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu dalka dib ugu soo laaban doono maalinimda Khamiista ee beri, ra’iisul waaaare Xamsena uu golaha shacabka horgeyn doono maaliniamda Sabtida ee todobaadka soo socda oo laba maalin oo qura ay inaga xigaan.